दुई वाइड बडी विमान किन्दा ठूलै आर्थिक चलखेल ! — Motivatenews.Com
दुई वाइड बडी विमान किन्दा ठूलै आर्थिक चलखेल !
भदौ २ , काठमाडौं –स्थापनाको ६० वर्षमा नेपाल एयरलाइन्सले दुइटा ‘वाइड बडी’ विमान किनेको छ । यसमा गर्व गर्नुपर्छ । त्यसको खरिद प्रक्रियाले भने यसमा चस्स पार्छ । २३ अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढीमा जहाज किन्दा सबैजसो कारोबार ‘नक्कली’ गरिएको छ । यसमा ठूलो मात्रामा चलखेल भएको प्राप्त कागजातहरूले देखाएका छन् ।
नेपाल एयरलाइन्सले तत्काल जहाज आवश्यक ठान्यो । नयाँ किन्दा समय बढी लाग्ने तर्क राखियो । उपाय फुराइयो– सेकेन्ड ह्यान्ड लिने, तुरुन्त पाइन्छ । त्यसैले प्रस्ताव आह्वान (आरएफपी) मा लेखियो– ‘प्रस्तावित जहाजको उमेर हजार घण्टा भन्दा बढी नउडेको र जनवरी २०१४ भन्दा अघि नबनेको होस् ।’
नोभेम्बर ९ सम्मको म्याद दिएर २६ सेप्टेम्बर २०१६ मा आरएफपी जारी गरिएको थियो । सेप्टेम्बर २०१७ र मार्च २०१८ मा एउटा÷एउटा जहाज बुझाउनु पर्ने त्यसमा सर्त राखियो । ‘अर्काले उडाइसकेको जहाज किन्न किन १६ महिना सम्मको भाका राखियो भन्नेमै खोटी नियत थियो’, एयरलाइन्स बोर्डकै एक सदस्यले भने, ‘हामीले त्यति अवधिमा त नयाँ किन्न सकिन्छ भन्दा बोल्नै दिएनन् ।’
स्रोत भन्छ– ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ किन्ने निचोडमा पुग्नुका मुख्य दुई नियत थिए । १. अत्यन्त जरुरी परेर हतारमा किनिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गर्न पाउनु र २. उत्पादककहाँ सिधै जानबाट जोगिनु । उत्पादककहाँ सोझै जाँदा दुइटा समस्या पर्थे– १. बिल तलमाथि गर्न नपाउनु र, २. सेटिङ मिलाउने बिचौलियासँग काम गर्न नपाउनु ।
एएआरले म्याक्सिमम टेक अफ वेट (एमटीओडब्लु) अर्थात् अधिकतम उडान भार २ लाख ४२ हजार केजी हुने प्रस्तावमा हालेको थियो । हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग खरिद सम्झौता गर्दा २ लाख ३० हजार केजी राखियो ।
एमटीओडब्लु विमान उडाउँदाको अधिकतम भारवहन क्षमता हो । एमटीओडब्लु घट्नु जहाजको मूल्य र त्यसको कमाइ दुवै घट्नु हो । एयरलाइन्स व्यवस्थापनले भने एमटीओडब्लु घटी हुनुलाई ‘झन् राम्रो’ भन्ने गरेको पाइएको छ । तर त्यस्तो होइन । प्रस्तावक मध्ये केजेटी इन्भेस्टमेन्टले २ लाख ३३ हजार केजी एमटीओडब्लु राखेको थियो । यसलाई बढाउने हो भने ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर थप्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । यसले प्रस्ट्याउँछ– १२ हजार एमटीओडब्लु घटाउँदा ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल भएको छ ।